“Takalo Haingo”: manafy kanto ny sarambabem-bahoaka | NewsMada
“Takalo Haingo”: manafy kanto ny sarambabem-bahoaka
Raha vao hoe famoronana lamaody no resahina, olona “mihaja” na koa manam-bola, toy ireny fahita amin’ny fahitalavitra rehefa misy filatroana ireny, no mby ao an-tsain’ny tsirairay.
Ho an’ny mpikarakara ny “Takalo haingo” kosa, tsy anavahana olona ny vokatry ny famoronana eo amin’ny fitafy sy ny kojakoja miaraka aminy. Izay ny antom-pisian’ny “Takalo haingo”, tonga amin’ny andiany faha-11 ary hotanterahina eto an-dRenivohitra, ny 21 sy ny 22 desambra izao. Hibahan-toerana, toy ny mahazatra, ny filatroana, tsy toy ny fahita amin’ny resaka lamaody fa hisokatra hojeren’ny rehetra (maimaimpoana), toy ny ao amin’ny Craam Ankatso (ny 21 desambra) sy ho eny ankalamanjana (ny 22 desambra).
Asa famoronan’ny Malagasy ho an’ny Malagasy ny tanjon’ny “Takalo haingo”. Samy hahazo sehatra na ny matihanina na ireo vao misandratra eo amin’ny asa famoronana lamaody. Sehatra ianarana moa ny “Takalo haingo”. Nanomboka ny volana janoary 2018, nisy ny fampiofanana tanora miisa efatra. Hasehon’izy ireo amin’ity hetsika ity ny vokatry ny fiofanana, nomen’i Ariry, tao anatin’izay 11 volana izay.
Ankoatra ny fanofanana mpamorona, manamafy ny fahaiza-manao eo amin’ny sehatry ny filatroana ihany koa ny “Takalo haingo”. Satria tsy mifidy sokajin’olona ny lamaody, tsy mifidy halavana sy habe ary taona ihany koa ny filatroana. Araka izany, misokatra ho an’ny rehetra ity fiofanana ity. Tsiahivina fa, ankoatra ny hay fitafy, manasongadina ny haingo sy ny kojakoja miaraka aminy koa ny “Takalo haingo”.